सप्तरीमा ६५ प्रतिशत भन्दा बढी मतदान, डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको एक केन्द्रमा विवादपछि निर्वाचन स्थगित
News Category 2079/01/30
राजविराज, ३० बैशाख ।
शुक्रबार सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा सप्तरीमा ६५ प्रतिशत भन्दा बढी मतदान भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
९ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि भएको निर्वाचनमा ६५ प्रतिशत भन्दा बढीले मतदान गरेका छन् ।
शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनमा जिल्लाको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नं. २ बाहेक सबै ५ सय ३५ मतदान केन्द्रमा उत्साह र शान्तिपूर्ण ढंगले मतदान भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेश कुमार जोशीले जानकारी दिएका छन् ।
यद्दपी बिचबीचमा भएको वर्षाका कारण राजविराज र बोदेबरसाइन नगरपालिकामा केही मतदान केन्द्रमा रोकिएको मतदान कार्य फेरी सुरु भएको र अबेर साँझसम्म मतदान हुने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा ४ लाख १२ हजार ४ सय ४५ कुल मतदाता छन् । मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका संकलन कार्य भइरहेको र तोकिएको केन्द्रमा मतगणना सुरु गर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको तयारी छ ।
सबै मतपेटिका संकलन भइसकेपछि सर्वदलिय बैठक गरि मतगणनाको समय निर्धारण गरिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख जोशीले बताए ।
यता सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नं. २ को मतदान केन्द्रमा मतदान चलिरहेका बेला एक उम्मेदवारका समर्थित व्यक्तिले मतपेटिका तोडफोड तथा मतदानमा खटिएका कर्मचारीमाथी हातपात गरिएपछि निर्वाचन स्थगित गरिएको छ ।
मतदान गर्न गएका एक जना शारिरीक रुपले अशक्त बृद्ध मतदाताले इच्छाएको उम्मेदवार भन्दा अर्कै उम्मेदवारको चुनाव चिन्हमा मतसंकेत गरिदिएको आरोप लगाएर होहल्ला गरेपछि मतपेटिका तोडफोड र मतदान अधिकृत विपिन यादवमाथी हातपात भएपछि निर्वाचन स्थगित गरिएको हो ।
स्थगित गरिएको निर्वाचन जेठ १ गते हुने तय गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।